Onye isi ochichi nke njem nlegharị anya nke Afrika St.Ange: African Tourism di ebe a
Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Onye isi ochichi nke njem nlegharị anya nke Afrika St.Ange: African Tourism di ebe a
Onye isi ala ọhụrụ nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa abụghị onye ọhụụ na njem njem Africa na njem nlegharị anya. Alain St. Ange bụ mịnịsta nke njem maka Seychelles na tupu na isi nke Seychelles Tourism Board.
O nwegoro aha nye Afrịka niile mgbe o bidoro Victoria Carnival maka Africa na ụwa.
N'ikwu okwu banyere ọkwa ọhụrụ ya o kwuru, sị: “Mgbe m weere ọnọdụ Onye isi oche nke Board of Tourism Africa, nke a mere ka ụwa niile bụrụ njem Africa ka m natara oku site n'aka ọtụtụ ndị mịnịsta njem na ndị isi nke ndị metụtara njem njem site n'akụkụ niile nke Africa , o gosipụtara n'ụzọ doro anya mkpa njem dị maka kọntinent ahụ.
Ọbụna Onye isi ala Seychelles, Maazị Danny Faure, zipụrụ ozi ekele mgbe m nwetasịrị ọrụ m dị ka Onye isi oche nke African Tourism Board, dị ka onye isi oche mbụ nke agwaetiti ahụ Mr. James Michel.
Maka Seychelles, amaara njem dị mkpa dị ka ụlọ ọrụ na-asọpụrụ dị ka ogidi akụ na ụba, mara ma nabata.
Mana Seychelles adịghị iche na mpaghara ndị ọzọ nke Afrịka n'ihi na ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya nwere ike inye aka ịkwado akụ na ụba nke ọtụtụ mba na kọntinent ahụ.
Anyị na-eme atụmatụ ugbu a nzukọ na-esote ebe anyị nwere ike ịlele nsogbu ndị anyị na-eche ihu ma kọọrọ anyị akụkọ ọma na mmụta.
Onye isi oche ohuru a hoputara nke ndi njem njem Afrika, Doris Woerfel, onye no na Pretoria, South Africa, huru nnukwu ikike nke Afrika site na China ma burukwa ugbua itinye ulo oru ndi otu na Africa maka ATB.
Ọ na-agagharị ugbu a ịkpọtụrụ ndị na-egwu egwuregwu ụlọ ọrụ n'ofe Africa ka hazie nzukọ ọzọ a ga-enwe na Ọgọstụ nke afọ a.
A ga-akpọ ndị nta akụkọ si n'ofe Africa ka ha bịa maka na ihe ịga nke ọma maka ndị njem njem njem n'Africa dabere na ha. "
O kwubiri site n’ikwu: Enwere m ike ịrịọ onye ọ bụla nọ n ’ọha na nke ọha na eze ka ha sonye n’azụ ndị njem njem nlegharị anya nke Africa ka Africa bụrụ otu ebe ndị njem ga - esoro.
Ozi ndi ozo banyere ndi njem nleta ndi Africa na iso anyi www.africantourismboard.com
Ọzọ na: Africa | Tourism | Ntu | Seychelles | China
Mkpakọrịta n'ịntanetị na ndị ọbịa na-ezukọ karịa okpukpu abụọ n'oge ọrịa na-efe efe China|
Africa Ntu China Seychelles Tourism
The Landmark Bangkok họpụtara onye otu SKAL Francis Zimmerman dị ka GM ọhụrụ
eTN ghọrọ SUNX SDG 17 Onye Mmekọ na-akpọ maka ịdị ọcha ihu igwe na njem nleta na ụbọchị ụwa
Ihe karịrị mmadụ 120,000 gbakọtara na Brussels maka ndị Belgium…